निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबीभुक्तानी नपाइने
काठमाण्डौ । सरकारबाट अनुमतिप्राप्त गरी कोभिड १९ को संक्रमण पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण गरिरहेका निजी ल्याबहरुको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाइने भएको छ। बिमा समितिले कोरोना बिमा गराइरहेका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउँदै निजी ल्याबबाट आएको पोजिटिभ रिपोर्टका आधारमा दाबीभुक्तानी नदिन भनेको हो । यो...
निषेधाज्ञामा पनि बीमा कम्पनीहरु खोल्न निर्देशन
काठमाण्डौ । नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय बीमा समितिले निषेधाज्ञाका बेला पनि बीमकहरुले दैनिक कार्य सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले बुधबार सूचना प्रकिाशत गर्दै एक तिहाइ कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले बीमा कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले निषेधाज्ञाका...
काठमाण्डौ । मुलुकभर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै देशका सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्ना ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालयमा राखेर काम गराउन पाउने भएका छन् । बिमाको नियामक बीमा समितिले एक परिपत्र जारी गर्दै सबै जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीलाई कार्यालयमा नराख्न भनेको हो । बीमा...
काठमाण्डौ । बीमासम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरु अहिले पनि सक्रिय रहेका छन्। कोभिड–१९ को जोखिमका बीच भौतिक दूरी कायम राखेर समितिले दफावार छलफल चलाइरहेको छ। ‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय...
कुन जीवन बिमा कम्पनी कति बलियो ? हेरौं प्रथम बिमाशुल्क आर्जनका आधारमा गरिएको विश्लेषण
काठमाण्डौ । देशका १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ हजार ३८० करोड प्रथम बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । जीवन बिमा कम्पनीहरुको विजिनेश ग्रोथलाई मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक प्रथम बिमा शुल्क आर्जन हो । यसले कुन कम्पनीले नयाँ विजिनेशमा कुन स्तरको ग्रोथ गरेको छ भन्ने देखाउँछ । अर्थात, कुन कम्पनीले नयाँ विजिनेश कति ल्यायो...
कोभिड–१९ बीमाप्रति आकर्षण बढ्दो, १ महिनामै २ लाख बढीले गरे बीमा
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसलाई ध्यानमा राखेर बीमा समितिले ल्याएको कोभिड–१९ बीमामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ। यो बीमा योजना सुरु भएको एक महिनामै २ लाख बढीले बीमा गरिसकेको बीमा समितिले जनाएको छ। बीमा समितिको सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार २ लाख १५ हजारजनाले कोभिड–१९ बीमा गरिसकेका छन्। बीमा समितिका अध्यक्ष...
काठमाण्डौ । छोटो समयमै राम्रो रेसपोन्स आएको कोरोना बिमामा नियामक बिमा समितिले कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ । देशका सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुमार्फत कोरोना बिमा हुँदै आएको छ । बैशाख ७ गतेदेखि सुरु भएको कोरोना बिमा अन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ गरी दुईखालको बिमालेख खरीद गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । छोटो समयमै यो बिमालेखमा...
काठमाण्डौ । बिमालेख धितो राखी ऋण लिनेहरुले बिमा कम्पनीहरुबाट ब्याजमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बीमा समितिले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै बिमालेख धितो राखी ऋण लिनेहरुले लकडाउन सकिएको एक महिनाभित्रमा ब्याज बुझाउन आएमा ब्याजको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट दिन निर्देशन दिएको हो । बीमा लेख धितोमा राखी बीमा कम्पनीहरुले...
काठमाण्डौ। बीमा समितिले सवारी साधनका बीमितलाई प्रिमियममा केही राहत दिने भएको छ। समितिको बैठकले चैत ११ देखि देशभर बन्दाबन्दी भएर सवारीसाधन नचल्दा बीमा जोखिम न्यून हुन गएकाले प्रिमियममा राहत दिने निर्णय गरेको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बन्दाबन्दीको अवधिभर बीमा शुल्क आगामी वर्षको बीमा नवीकरण छुट दिने निर्णय गरेको...
काठमाण्डौ। बीमा समितिले कोरो बीमालेखसँग जोडी केही जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमक तथा अन्य संस्थाहरुले समेत कोरोना बीमा गर्ने र निःशुल्क कोरो बीमा गरिदिने भन्ने व्यहोरासहित सूचना प्राप्त भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समितिबाट सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्र कोरोना बीमा गर्ने स्वीकृति पाएको समितिले सोमबार एक विज्ञप्ति...
कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाका शिशुसहित परिवारका चारै सदस्यको रिपोर्ट नेगेटिभ
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीय सुत्केरीको १३ दिने शिशु र परिवारका अन्य सदस्यको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–९ बाह्रबिसे बजारकी २९ वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि शिशुसहित उनकाका श्रीमान, माइतीतर्फकी आमा र बहिनीको पनि नमुना संकलन भएको...
बिमा कम्पनीले धितोपत्रमा गर्ने लगानीको सीमा बढाउन सेबोन अध्यक्षको सुझाव
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बिमा कम्पनीहरुले धितोपत्र बजारमा गर्ने लगानीको सीमा बढाउन सकिने सुझाव दिएका छन् । बिमा समितिको ५२ औं वार्षिकोत्सवलाई अनलाइनबाट सम्बोधन गरेका अध्यक्ष ढुंगानाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । यो सुझाव कार्यान्वयनका लागि बिमा समिति सकारात्मक हुन जरुरी हुन्छ । ‘दोश्रो...
पुनर्बिमा कम्पनीको कामप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट, नयाँ संस्थालाई अवसर दिन निर्देशन
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको पुनरबिमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट समेत पुनरबिमा कम्पनी स्थापनाको बाटो खोल्ने व्यवस्था गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । बिमा समितिको ५२ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई अनलाइन वेवीनारमार्फत सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले...